မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲတွေဟာ အမြဲလိုလို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်
မန်ချက်စတာဒါဘီ သမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်များ
11 Nov 2018 . 3:39 PM
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဒါဘီပွဲကောင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဘီပြိုင်ဘက်တွေ ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ မထင်မှတ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကိုလည်း အမြဲလိုလို မြင်တွေ့ရခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်မှာဆိုရင် မန်ချက်စတာဒါဘီက ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံး ဒါဘီတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မန်ချက်စတာဒါဘီ သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပွဲတွေကို ပရိသတ်တွေ ပြန်လည်အမှတ်ရစေဖို့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် . .
မန်ယူ ၀-၁ မန်စီးတီး (၁၉၇၃-၇၄)
မန်ယူ ပရိသတ်တွေအတွက် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် ပွဲတစ်ပွဲပါ။ မန်ယူအသင်း ပထမတန်းကနေ တန်းမဆင်းရစေဖို့ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် မန်ယူပရိသတ်တွေ ကြေကွဲခဲ့ရတဲ့အပြင် မန်စီးတီးအတွက် အနိုင်ဂိုးသွင်းခဲ့တာက မန်ယူဂန္ထ၀င် ဒင်းနစ်လော Denis Law ဖြစ်နေလို့ ပိုပြီး ထိခိုက်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲအပြီးမှာ ဒင်းနစ်လောလည်း သူ့ဂိုးကြောင့် အသင်းဟောင်း တန်းဆင်းခဲ့ရလို့ ဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ ၀မ်းနည်းတကြီး ငိုကြွေးခဲ့တော့တာပါပဲ။
မန်ယူ ၀-၁ မန်စီးတီးပွဲကြည့်ရန် လင့်ခ်
မန်စီးတီး ၂-၃ မန်ယူ (၁၉၉၅-၉၆)
ဒီတစ်ခါတော့ ၁၉၇၃-၇၄ ရာသီနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းက တန်းမဆင်းရအောင် ရုန်းကန်နေရချိန်ဖြစ်ပြီး မန်ယူက ချန်ပီယံဆုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်။ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ကွင်းဟောင်း Maine Road မှာ မန်ယူက (၂-၃)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး မန်စီးတီပရိသတ်တွေရဲ့ မျှေ်ာလင့်ချက်ကို ရိုက်ချိုးဖြတ်စီးခဲ့တယ်။
မန်စီးတီး ၂-၃ မန်ယူ ပွဲကြည့်ရန် လင့်ခ်
မန်ယူ ၄-၃ မန်စီးတီး (၂၀၀၉-၁၀)
နောက်ဆုံးမိနစ်အထိ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရပြီး နာကျင်အချိန်ပို နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ မန်ယူတိုက်စစ်မှူး အိုဝင် Michael Owen ရဲ့ အနိုင်ဂိုးကြောင့် မန်ယူတို့ အမှတ်ပြည့်ရခဲ့တယ်။ ပွဲက အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အကြိတ်အနယ်ရှိခဲ့ပြီး နာကျင်အချိန်ပိုကို (၄)မိနစ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင် Alan Wiley က (၆)မိနစ်အထိ ပေးခဲ့လို့ မန်စီးတီးနည်းပြ မာ့ခ်ဟုခ်ျ Mark Hughes ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကလည်း အခုထိ အမှတ်ရစရာပါပဲ။
မန်ယူ ၄-၃ မန်စီးတီးပွဲကြည့်ရန် လင့်ခ်
မန်ယူ ၂-၁ မန်စီးတီး (၂၀၁၀-၁၁)
ဒီပွဲမှာ အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တာက ၀ိန်းရွန်နီ Wayne Rooney ရဲ့ နောက်ပြန်ကန်ချက်နဲ့ သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးပါပဲ။ (၄၁)မိနစ်မှာ နာနီ Nani က အဖွင့်ဂိုးသွင်းခဲ့ပေမယ့် ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား David Silva က ချေပဂိုးပြန်သွင်းခဲ့တယ်။ (၇၈)မိနစ်မှာ ညာခြမ်းကနေ နာနီ ဖြတ်တင်ပေးလိုက်တာကို ရွန်နီက နောက်ပြန်ကန်ချက်နဲ့ လှလှပပ ကန်သွင်းပြီး မန်ယူအတွက် ချိုမြိန်တဲ့ နိုင်ပွဲကို ရယူပေးခဲ့တယ်။
မန်ယူ ၂-၁ မန်စီးတီးပွဲကြည့်ရန် လင့်ခ်
မန်ယူ ၁-၆ မန်စီးတီး (၂၀၁၁-၁၂)
ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ပထမဆုံးဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ရပ်တန့်လို့ မရတဲ့ခြေစွမ်းပြသခဲ့ပြီး မန်ယူအသင်းကို ၁၉၅၅ ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံး အိမ်ကွင်းရှုံးပွဲမှတ်တမ်း ရရှိစေခဲ့တယ်။ အမှတ်ရစရာဖြစ်ခဲ့တာက မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူး ဘာလိုတယ်လီ Mario Balotelli က ဂိုးသွင်းအပြီး “Why Always Me” ဆိုတဲ့ စာတန်းပါ အင်္ကျီနဲ့ အောင်ပွဲခံခဲ့တာပါပဲ။
မန်ယူ ၁-၆ မန်စီးတီးပွဲကြည့်ရန် လင့်ခ်
မန်စီးတီး ၂-၃ မန်ယူ (၂၀၁၇-၁၈)
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အီတီဟတ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကလည်း မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲ သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးပွဲတွေထဲက တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ မန်စီးတီးအသင်းက ပထမပိုင်းမှာ ဧည့်သည်အသင်းကို အဖက်ဖက်က အသာစီးနဲ့ ကစားခဲ့ပြီး ကွန်ပနီ Kompany ၊ ဂန်ဒိုဂမ် Gündoğan တို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ (၂)ဂိုးပြတ် ဦးဆောင်နေလို့ မန်ယူတော့ အရှက်ကွဲပြီလို့ ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယပိုင်းမှာ သူရဲနီစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ မန်ယူ ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ပေါ့ဘာ Pogba (၂)ဂိုး၊ စမောလင်း Smalling က အနိုင်ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့တာကြောင့် (၂-၃)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။
မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲတွေဟာ အမြဲလိုလို ရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့ပြီး အဲဒီထဲကမှ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ပွဲတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်အမှတ်ရနေတဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲတွေကို ပြောပြခဲ့ပါဦး . .
Photo:Getty Images,.citytilidie,Premier League,en.onefootball,The Week UK
မနျခကျြစတာဒါဘီ သမိုငျးမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမြား
ကမ်ဘာတဈဝှမျးက လိဂျပွိုငျပှဲတှမှော ဒါဘီပှဲကောငျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒါဘီပွိုငျဘကျတှေ ဆုံတှတေဲ့ပှဲတိုငျးမှာ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာ၊ မထငျမှတျတဲ့ အပွောငျးအလဲတှကေိုလညျး အမွဲလိုလို မွငျတှရေ့ခဲ့တယျ။ အင်ျဂလနျမှာဆိုရငျ မနျခကျြစတာဒါဘီက ပွိုငျဆိုငျမှုအပွငျးထနျဆုံး ဒါဘီတှထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မနျခကျြစတာဒါဘီ သမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးဖွဈခဲ့တဲ့ ပှဲတှကေို ပရိသတျတှေ ပွနျလညျအမှတျရစဖေို့ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ . .
မနျယူ ဝ-၁ မနျစီးတီး (၁၉၇၃-၇၄)
မနျယူ ပရိသတျတှအေတှကျ ဘယျတော့မှ မမနေို့ငျမယျ့ ပှဲတဈပှဲပါ။ မနျယူအသငျး ပထမတနျးကနေ တနျးမဆငျးရစဖေို့ အဆုံးအဖွတျဖွဈတဲ့ မနျစီးတီးနဲ့ပှဲမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ မနျယူပရိသတျတှေ ကွကှေဲခဲ့ရတဲ့အပွငျ မနျစီးတီးအတှကျ အနိုငျဂိုးသှငျးခဲ့တာက မနျယူဂန်ထဝငျ ဒငျးနဈလော Denis Law ဖွဈနလေို့ ပိုပွီး ထိခိုကျစရာဖွဈခဲ့တယျ။ အဲဒီပှဲအပွီးမှာ ဒငျးနဈလောလညျး သူ့ဂိုးကွောငျ့ အသငျးဟောငျး တနျးဆငျးခဲ့ရလို့ ဟနျမဆောငျနိုငျဘဲ ဝမျးနညျးတကွီး ငိုကွှေးခဲ့တော့တာပါပဲ။
မနျယူ ဝ-၁ မနျစီးတီးပှဲကွညျ့ရနျ လငျ့ချ
မနျစီးတီး ၂-၃ မနျယူ (၁၉၉၅-၉၆)
ဒီတဈခါတော့ ၁၉၇၃-၇၄ ရာသီနဲ့ ပွောငျးပွနျဖွဈသှားတယျ။ မနျစီးတီးအသငျးက တနျးမဆငျးရအောငျ ရုနျးကနျနရေခြိနျဖွဈပွီး မနျယူက ခနျြပီယံဆုအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနခြေိနျ။ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ကှငျးဟောငျး Maine Road မှာ မနျယူက (၂-၃)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူခဲ့ပွီး မနျစီးတီပရိသတျတှရေဲ့ မြျှောလငျ့ခကျြကို ရိုကျခြိုးဖွတျစီးခဲ့တယျ။
မနျစီးတီး ၂-၃ မနျယူ ပှဲကွညျ့ရနျ လငျ့ချ
မနျယူ ၄-၃ မနျစီးတီး (၂၀၀၉-၁၀)
နောကျဆုံးမိနဈအထိ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားခဲ့ရပွီး နာကငျြအခြိနျပို နောကျဆုံးမိနဈမှာ မနျယူတိုကျစဈမှူး အိုဝငျ Michael Owen ရဲ့ အနိုငျဂိုးကွောငျ့ မနျယူတို့ အမှတျပွညျ့ရခဲ့တယျ။ ပှဲက အပွနျအလှနျသှငျးဂိုးတှနေဲ့ အကွိတျအနယျရှိခဲ့ပွီး နာကငျြအခြိနျပိုကို (၄)မိနဈသာ သတျမှတျခဲ့ပမေယျ့ ကှငျးလယျဒိုငျ Alan Wiley က (၆)မိနဈအထိ ပေးခဲ့လို့ မနျစီးတီးနညျးပွ မာ့ချဟုချြ Mark Hughes ဒေါသပေါကျကှဲခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျတှကေလညျး အခုထိ အမှတျရစရာပါပဲ။
မနျယူ ၄-၃ မနျစီးတီးပှဲကွညျ့ရနျ လငျ့ချ
မနျယူ ၂-၁ မနျစီးတီး (၂၀၁၀-၁၁)
ဒီပှဲမှာ အမှတျတရဖွဈခဲ့တာက ဝိနျးရှနျနီ Wayne Rooney ရဲ့ နောကျပွနျကနျခကျြနဲ့ သှငျးခဲ့တဲ့ဂိုးပါပဲ။ (၄၁)မိနဈမှာ နာနီ Nani က အဖှငျ့ဂိုးသှငျးခဲ့ပမေယျ့ ဒေးဗဈဆေးလျဗား David Silva က ခပြေဂိုးပွနျသှငျးခဲ့တယျ။ (၇၈)မိနဈမှာ ညာခွမျးကနေ နာနီ ဖွတျတငျပေးလိုကျတာကို ရှနျနီက နောကျပွနျကနျခကျြနဲ့ လှလှပပ ကနျသှငျးပွီး မနျယူအတှကျ ခြိုမွိနျတဲ့ နိုငျပှဲကို ရယူပေးခဲ့တယျ။
မနျယူ ၂-၁ မနျစီးတီးပှဲကွညျ့ရနျ လငျ့ချ
မနျယူ ၁-၆ မနျစီးတီး (၂၀၁၁-၁၂)
ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ပထမဆုံးဆှတျခူးခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ ရပျတနျ့လို့ မရတဲ့ခွစှေမျးပွသခဲ့ပွီး မနျယူအသငျးကို ၁၉၅၅ ဖဖေျောဝါရီနောကျပိုငျး အဆိုးရှားဆုံး အိမျကှငျးရှုံးပှဲမှတျတမျး ရရှိစခေဲ့တယျ။ အမှတျရစရာဖွဈခဲ့တာက မနျစီးတီးတိုကျစဈမှူး ဘာလိုတယျလီ Mario Balotelli က ဂိုးသှငျးအပွီး “Why Always Me” ဆိုတဲ့ စာတနျးပါ အင်ျကြီနဲ့ အောငျပှဲခံခဲ့တာပါပဲ။
မနျယူ ၁-၆ မနျစီးတီးပှဲကွညျ့ရနျ လငျ့ချ
မနျစီးတီး ၂-၃ မနျယူ (၂၀၁၇-၁၈)
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အီတီဟတျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲကလညျး မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲ သမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးပှဲတှထေဲက တဈပှဲဖွဈခဲ့တယျ။ မနျစီးတီးအသငျးက ပထမပိုငျးမှာ ဧညျ့သညျအသငျးကို အဖကျဖကျက အသာစီးနဲ့ ကစားခဲ့ပွီး ကှနျပနီ Kompany ၊ ဂနျဒိုဂမျ Gündoğan တို့ရဲ့ ဂိုးတှနေဲ့ (၂)ဂိုးပွတျ ဦးဆောငျနလေို့ မနျယူတော့ အရှကျကှဲပွီလို့ ထငျမှတျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒုတိယပိုငျးမှာ သူရဲနီစိတျဓာတျအပွညျ့နဲ့ မနျယူ ပွနျလာနိုငျခဲ့ပွီး ပေါ့ဘာ Pogba (၂)ဂိုး၊ စမောလငျး Smalling က အနိုငျဂိုးတှေ သှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ (၂-၃)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။
မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲတှဟော အမွဲလိုလို ရငျခုနျစရာကောငျးခဲ့ပွီး အဲဒီထဲကမှ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ပှဲတှကေို ရှေးခယျြခဲ့တာပါ။ ပရိသတျတှလေညျး ကိုယျအမှတျရနတေဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲတှကေို ပွောပွခဲ့ပါဦး . .